के कुखुराको सुप खाँदा कोरोना ठिक हुन्छ ? ६० वर्षीया डाक्टरले गरिन् यस्तो अनौठो दावी — Imandarmedia.com
१प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति भण्डारीबीच भेटवार्ता
३दक्षिणकालीमा टिपरको ठक्करबाट पैदलयात्रीको मृत्यु
४भारतमा कोरोनाको दोस्रो लहरको सङ्केत : ४ राज्यमा एक हप्तादेखि निको हुनेभन्दा नयाँ संक्रमितको सङ्ख्या बढी
५देउवाले बोलाए कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूको बैठक
६‘नेकपा’ नामको विवादमा सुनुवाइ सकियो, के आयो सर्वोच्चले निर्णय ?
७सेफ’का उपविजेता सन्तोष साहलाई विमानस्थलमा पञ्चे बाजासहि स्वागत
८ओली समूह र कांग्रेस गठबन्धनको सरकार बन्छ- मोहनविक्रम सिंह
९शिक्षकले तलब नपाएको भन्दै विद्यार्थीले नै गरे विद्यालयमा तालाबन्दी
११सत्ता समीकरणका विषयमा छलफल गर्न कांग्रेस पदाधिकारी बैठक बस्दै
१२बझाङमा काेराेनाकाे जस्तै लक्षण विद्यार्थी र शिक्षकलाइ देखापरेपछि विद्यालय बन्द
के कुखुराको सुप खाँदा कोरोना ठिक हुन्छ ? ६० वर्षीया डाक्टरले गरिन् यस्तो अनौठो दावी
काठमाडौं । अहिले विश्वभर कोरोनाको त्रासले मान्छेहरु दैनिकी खराब बनाएको छ । यो बीचमा बेलायतका एक अनुभवी चिकित्सकले दावी गरेको एक तथ्यले सबैको होस उडाएको छ । उनले सामान्य औषधी र साधारण खाद्यान्न वस्तुहरूको साथ कोरोना भाइरससँग लड्न सफल भएका छन् । ६० वर्षीया चिकित्सक क्लेयर गेराडा रोयल कलेज अफ जनरल प्रक्टिसनर्स ९युके० को प्रमुख हुन् । न्यूयोर्कमा भएको सम्मेलनबाट फर्केपछि उनलाई कोरोना संक्रमण भएको पत्ता लागेको थियो ।
द सनको रिपोर्टका अनुसार डाक्टरले सुरुमा ज्वरो, जोर्नी र टाउको दुख्ने गरेको बताइन् । उनी निरन्तर खोकी लागिरहेको थियो । तर क्लेयर अब कोरोना भाइरस संक्रमणबाट मुक्त भईसकिन् । कोरोना भाइरस संक्रमणलाई रोकथाम गर्न वा उपचार गर्नको लागि कुनै औषधि बनाइएको छैन । डाक्टरहरूले लक्षणहरूको आधारमा मात्र बिरामीहरूको उपचार गर्छन् ।
कोरोना भाइरससँग डराउने क्लेर आशा गर्छिन् कि यदि बुढापाकाहरूलाई पनि संक्रमण भयो भने धेरैजना बाँच्नेछन् । क्लेयरले भनिन्, ‘मेरो शरीरको ऊर्जा समाप्त भएर गयो । उनी सामान्य नोट लिने अवस्थामा थिइनन् । यो रोग बढ्न थालिसकेको थियो ।’ तर क्लेर भन्छिन् कि उनले कहिल्यै आफ्नो जीवन जोखिममा रहेको महसुस गरिनन् ।
क्लेयरले उनको शरीर भाइरससँग पूर्ण ताकतका साथ लडिरहेको थियो भन्दै जानकारी दिइन् । उनले भनिन, ‘म बुझ्छु किन मानिसहरू चिन्तित छन्, तर प्रायः म जस्तो बाँच्ने छन् । यस कारणले गर्दा, अकालमा मृत्यु हुने छैन ।’ क्लेयरले उनका पति जो आफै रोयल कलेज अफ साइकियाट्रिष्टका पूर्व अध्यक्ष हुन् । उनी बिरामी हुँदा उनलक श्रीमान आफुलाई सर्छ कि भनेर मुखमा माक्स लगाएर हिड्ने गरेका थिए ।
६० बर्षे डाक्टरले आफु ५ दिनसम्म ओछ्यानमा थलन परेको जानकारी दिइन् । उनी केवल शौचालयमा जानको लागि उठ्ने गरेकी थिइन् । उनले प्यारासिटामोलको दुई औषधि दिनको तीन चोटि लिन्थे पनि भनेकी छिन् । लेमोनोइड र चिकन सूप पनि उनले पिउँने गरेकी थिइन् । उनले भनिन्, ‘यस्तो देखिन्थ्यो कि कुखुराको सूपले आश्चर्यजनक कार्य गर्यो । यस समयमा उनले आफ्नो पतिसँग फोनमा मात्र कुरा गरिन ।
त्यसैबिच कोरोनाको नराम्रो असर भोगिरहेको पाकिस्तानमा अहिले अवस्था चिन्ताजनक रहेको छ । पाकिस्तानमा अहिले ताजा अवस्थामा झण्डै ३ सय आसपास संक्रमित रहेका छन् । पाकिस्तानमा पहिलो पटक कोरोनाका कारण २ जनाको ज्यान गएको छ । सार्क देशहरुमा एकदम खराब अवस्थामा रहेको पाकिस्तानमा ३०७ जना संक्रमित भएको बताइएको छ ।